Fironana makiazy 4 ho an'ny fararano 2021 | Bezzia
Tony Torres | 09/09/2021 20:00 | beauty
Mandondom-baravarana ny fararano ary miaraka aminy, fironana makiazy vaovao izay tonga hanampy loko amin'ity vanim-potoana ity. Efa tamin'ny lohataona lasa teo, ny catwalks lamaody malaza indrindra dia nampitandrina ny amin'izay ho avy ary tsy diso fanantenana mihitsy izy ireo. Ireo mpanakanto makiazy malaza eran-tany dia nampitandrina izany ny makiazy matanjaka sy voaravaka no nandresy tamin'ity fararano 2021 ity.
Miverina indray ny makiazy mahery, matte mainty ary voamariky ny volomaso mijanona am-po sy hoditra mitambatra. Ny feo tsy miandany amin'ny fizaran-taona farany dia manome endrika makiazy matanjaka indrindra ary maneho hevitra. Fanambarana ny fikasana rehetra hatramin'ny voalohany indray ny bika, no lasa mpandray anjara fototra. Mariho ny fironana makiazy amin'ny fararano 2021, izay hahitanao azy koa ny fitafianao azy ireo amin'ny fiainanao isan'andro.
1 Fironana makiazy, fomba fitafy azy ireo
1.1 Maso be marika
1.2 Loko pastel
1.3 Eyeliner miloko
1.4 Ny molotra mitarika
Fironana makiazy, fomba fitafy azy ireo
Eo ny catwalks hahatonga antsika hanonofy, haka sary an-tsaina tontolo iray feno hatsarana sy famoronana. Na dia amin'ny fotoana vitsivitsy aza dia momba ny makiazy na ny lamaody izay mora ovaina isan'andro. SAINGY ny majika amin'ny lamaody sy makiazy dia afaka mitrandraka ny fahaizany mamorona manararaotra ny fironana amin'ireo catwalk malaza indrindra eto an-tany. Ataovy ny anao ny makiazy, ampiharo amin'ny tenanao ireo fironana farany fa tsy manadino ny maha-ianao anao.
Ny fahafantarana fa ny lamaody sy ny fironana dia mihelina vetivety, ampifanaraho ireo izay mifanaraka indrindra amin'ny tsiro sy ny fombanao. Ovay izy ireo ho tokana ary lasa fironana. Mariho ny fironana makiazy amin'ity fararano ity sy ny torohevitra hitondrana azy ireo isan'andro isan'andro.
Maso be marika
Angamba izany dia vokatry ny fampiasana sarontava tamin'ny vanim-potoana tato ho ato na angamba satria ny fijery no ampahany lehibe indrindra amin'ny tarehy. Na inona na inona antony, ny maso indray no mpiorina makiazy amin'ity vanim-potoana fararano 2021 ity. Ary tsy amin'ny lafiny rehetra, ny mason'ny setroka dia mahery kokoa, voamarika tsara ary voafaritra tsara. Tamin'ny lohataona catwalks dia nanambara ny smokey madio indrindra, amin'ny mainty matte tena miasa.
Fa raha tsy tianao ny manao makiazy mahery toy izany mandritra ny andro, azonao atao ny manamboatra azy mora foana amin'ny alàlan'ny fisafidianana loko hafa. Ary eto no hihaonantsika ny manaraka amin'ity fironana ririnina fararano ity, izay hahafahanao mamorona endrika tsara amin'ny makiazy anao amin'ity vanim-potoana ity.
Ny alokaloky ny pastel dia tsy natao ho an'ny fahavaratra fotsiny fa izay lazain'ny manampahaizana momba ny makiazy. Mauve maivana sy manga ary pastel tonga manitsaka izy ireo amin'ity vanim-potoana ity. Na dia miolakolaka kely aza, satria ampiasaina amin'ny eyeliners sary na maso setroka mahery vaika tokoa izy ireo. Mamorona solomaso eo amin'ny alokaloky ny pastel tianao indrindra, aza manadino ny vokatra ary ampio tsikelikely mandra-pahazoanao alokaloka irina.
Ny manamarika ny tsipika ny maso mamorona tsipika amin'ny ankapobeny dia ny fanaovana eyeliner, iray amin'ireo fironana tranainy indrindra ary tsy miala amin'ny lamaody velively. Na izany aza, ity fararano ity no tazomina ny eyeliners mahatsikaiky indrindra, miaraka amin'ny loko mahery sy mavitrika izay handokoana ny fararano.
Ny molotra mitarika
Ny molotra dia tsy mitsahatra amin'ny maha-mpihetsiketsika azy, na dia mihemotra any aoriana aza izy ireo hanome ny anjara toerana lehibe amin'ny maso. Na izany aza, tsy mitsahatra ny maha-zava-dehibe azy ireo izy ireo, satria ny vavanao dia milaza zavatra betsaka momba anao ary miaraka amina sentetika lokomena vitsivitsy dia azonao atao ny mijery ny endrika mahavariana indrindra. Ity fararano 2021 ity mitafy molotra matanjaka izy ireo, satria izy irery no mpiorina voalohany amin'ny tarehy.
Miaraka amin'ny hoditra tena mamy, miasa tsara nefa miaraka amin'ny vokatra faran'izay kely indrindra. Mascara maivana ary somary mamontsina eo amin'ny takolakao sy ny lokonao tena matanjaka. Tsy mila bebe kokoa ianao raha te hampiseho endrika mahafinaritra, mahavariana ary mahavariana hanombohana ny andro. SATRIA ny makiazy dia lalao, mahafinaritra sy famoronana, mankafy ny fironana makiazy vaovao amin'ny fararano 2021.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » beauty » Fironana makiazy 4 ho an'ny fararano 2021